(UPDATE 1) Ergadii Uu Horkacayay Madaxweynaha Dowaldda Soomaaliya Ayaa Galabta Dib Ugu Soo Noqotay Dalka – Banaadir weyne
(UPDATE 1) Ergadii Uu Horkacayay Madaxweynaha Dowaldda Soomaaliya Ayaa Galabta Dib Ugu Soo Noqotay Dalka
MUQDISHO (WBW: The GBM) – Madaxweyanaha Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ergadii uu horkacayabba ayaa lagu soo waramayaa in galabta ay kusoo noqdeen Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho kadib marki uu Madaxweyne Farmaajo uu ka qeybgalay Caleemosaarkii Madaxweynaha Koofur Afrika Cyril Ramaphosa maalintii Sabtida aheyd oo ay bishan Maajo aheyd 25-ta.
Xalay waxaa uu Madaxweyne Farmaajo iyo ergadiisabba ay la kulmeen Jaaliyadda Soomaalida ee Koofur Afrika, sida lagu soo waramay.
“Jaaliyadda dalkaan, waxaad ku tilmaaman tihiin dadaalkiina iyo saameynta dhaw ee aad ku leedihiin nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed, waxaan idinku boorrinayaa in aad ilaashataan midnimadiinna iyo sumcadda Soomaalinimo ee aad xambaarsan tihiin,” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo mar uu la hadlaayay.
Arrimaha uu Madaxweyne Farmaajo uu ka gaabsanayay, ayaa lasoo sheegay iney kamid ahaayeen boobka lagu hayo goobaha ganacsiga Soomaalida, dilka iyo ugaarsiga lagu hayo dadka Soomaalida ah ee u qaxay Dalka Koofur Afrika; iyo sida uu Danjiraha Soomaaliya ee Koofur Afrika uu uga seexday Soomaalida dhiban.
Ugu dambeysti, waxaa lasoo sheegay in Madaxweyne Farmaajo, sida caadada u aheydba, uu diirada saaray bogaadis, amaan, iyo faankii lagu yiqiin tan iyo markii la doortay 8-dii Febraayo 2017-dii.
Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [The Great Banadir Media]) waxaa markasta lagala soco karaa wararka xiisaha leh.